एकै पटक ७ जनासंग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने कतारी राजकुमारी ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
एकै पटक ७ जनासंग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने कतारी राजकुमारी !
प्रकाशित मिति २८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०९:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । कतारकी राजकुमारी शेखा सल्वा लण्डनको एउटा होटलमा ७ जनासंग शारीरिक सम्बन्ध राख्दै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेकी छन् ।
लण्डनका संचारमाध्यहरुका अनुसार यो खबर सार्बजनिक नगर्न कतारी दूतावासले ५० करोड युरोको प्रस्ताव गरेको जनाएका छन् । तर, एक अखबार फाइनेन्सियल टाइम्सले रकम अस्वीकार गरी खबर छाप्ने निर्णय गरेको समाचारमा जनाईएको छ ।
ब्रिटेन र स्कटल्याण्डका सुरक्षा एजेन्सीको संयुक्त टोलीले राजकुमारीलाई ७ जनासँग होटलमा रंगेहात भेटेको जनाईएको छ । राजकुमारीले आफ्नो उद्देश्य कतारको इज्जत धमिल्याउनु तथा ब्रिटेनको कानुनको उल्लघन गर्नु नरहेको बताएकी छिन् । तर, सुरक्षाकर्मीले आपराधिक आरोप लागेका व्यक्तिहरुसंग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु गैरकानूनी भएको बताएका छन् ।
प्रहरीले राजकुमारी बसेको होटेलमा केही संदिग्ध व्यक्तिलाई देखेपछि होटेलमा छापा मारेको थियो । राजकुमारीले गैरकानुनी कार्य गरेको भएपनि उनले डिप्लोम्याटिक पासपोर्ट बोकेका कारण कारबाही गर्न नसकिने एक प्रहरीले जनाएका छन् ।
राजकुमारी शेखा पूर्व प्रधानमन्त्री हमद बिन जसीम बिन जबोर अल थानीकी छोरी हुन् भने कतारकी राजाको सौतेनी बहिनी राजकुमारी शेखाले मध्यस्थकर्तामार्फत सात युरोपेली युवकसँग सम्पर्क गरी सम्बन्ध राखेकी थिइन् ।
घटनाबारे कतारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
काठमाडौ । आमालाई दिएको गिफ्टले नै छोरा, छोरीलाई एक्ल्याउला भन्ने कसले पो सोचेको हुन्छ । तर यस्तै भएको छ…
नेविसंघ एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल शुरु !
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको विवाद चरम…
शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएमा शरीरमा सेतो दाग आउँने गर्छ । कसैमा वंशाणुगत गुणका कारण सेतो दुवी आउने…
जंगबहादुर राणाका बयालीस पत्नीको नामावली
सर्वप्रथम जंगबहादुरको यिनीसँग ‘बालविवाह’ भयो । यिनी काजी प्रसादसिंह बस्नेतकी अविवाहिततर्फकी छोरी हुन् । यिनको विवाह…
मौद्रिक नीति तयार गर्न छोडेर राष्ट्र बैंकका दुई सञ्चालक विदेश सयर
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटलाई सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले…
देउवालाई कांग्रेसभित्रै खतरा
काठमाण्डौ । विगत लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
गुट–उपगुटमा आधारित राजनीति हुने कांग्रेसको परम्पराले कांग्रेस कमजोर…